Ny vovonana atrehiko voalohany! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2021 4:48 GMT
Tanteraka ny nofinofy izay tsy nampoiziko rehefa niditra tato amin'ny Global Voices aho. Nanomboka tamin'ny fitsidihana nataon'ny tonian-dahatsoratry ny Global Voices ho an'ny Firenena Miteny Portiogey, Sara Moreira tany amin'ny oniversite izany rehetra izany.
Hatramin'ny nahatongavako tato amin'ny Global Voices (Desambra 2013) dia efa namoaka lahatsoratra sy nandika teny miisa 35 aho, izay nahatonga ahy ho ilay Mozambikana mavitrika indrindra tato amin'ny Global Voices ato amin'ny fireneko sy ato amin'ny faritra atsimon'i Afrika(. Nanokatra varavarana maro hiresahako amin'izao tontolo izao, hianarako tantara mahaliana maro ny fandraisako anjara tamin'ny vondrona Miteny Portiogey ary mahaliana ahy ny fotoana ahafahako mandray anjara amin'ny Vovonana. Nandray anjara tamin'ny fifidianana anatiny tao anatin'ny vondrona aho ary iray tamin'ireo voafidy, fifaliana lehibe ho ahy ny voafidy ary handeha ho any Filipina (Cebu) aho hanambara ny nahavoafidy ahy.
Handeha hanatrika ny Vovonana 2015 aho hizara ny tantaran'ny fireneko manokana, sy ny kaontinanta misy ahy ihany koa izay Afrika, tsy adinoko ny fianakaviako izay miteny Portiogey. Tsy ho adinoko ity fotoana ity izay efa nokasaiko fatratra araka izay tratra, sady mahazo fahalalana avy amin'ny hafa no mitantara ny tantara eto sy ny amin'izy ireo any. Tsy isalasalana fa ho fantatro avy amin'ireo izay tena manana traikefa ny fomba ahafahantsika mampiasa ny tambajotra sosialy amin'ny fomba mahomby sy miabo mba hamokarana vaovao tsara sy hanomezana fitenenana ny olom-pirenena. Ny olana mifandraika amin'ny fahazoana vaovao no tena mahaliana ahy, ary koa ny fiarovana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny sehatry ny fifandraisana virtoaly.